नेपालका लागि नेपाली अभियानका भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता प्रसाईले पैसाको तुजुक देखाएपछि..... - Ujyaalo Nepal
नेपालका लागि नेपाली अभियानका भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता प्रसाईले पैसाको तुजुक देखाएपछि…..
By ujyaalo	 Last updated Dec 1, 2019 817
……….ए मैले तिमीलाई सापटी दिएको थिईन त ?
ए अहिले स्यालरी बढ्यो की क्या हो तिम्रो ?
यो महिनाको घरमा पकेट खर्च चाहि घरमा मामुलाई के दिन्छ्यौ त ?
त्यही त मलाई म्यासेज आयो की पैसा हालेछौं । खुसी लाग्यो ।
ल ल ठीकै छ की । सबै मैले बुझ्या छु । अब एकदेखि डेढदेखि दुई वर्षमा सबै कुरा बुझिहाल्छु………...
प्रश्तुत सम्वाद हुन आफूलाई सामाजिक अभियन्ताका रुपमा चिनाउदै आएका एकजना भलादमी महेन्द्र प्रसाईका । आफूलाई नेपालका लागि नेपाली अभियानका केन्द्रीय अभियन्ता तथा झापा संयोजक बताउने महेन्द्र प्रसाईले एक जना महिला कर्मचारीसंग पैसाको प्रलोभन दिएर नजिकिन खोजेको रहस्य खुलेको छ ।
उज्यालो नेपाललाई प्राप्त अडियो रेर्कडमा अभियन्ता प्रसाईले सुरुमा महिलालाई केही रकम दिएका छन । प्राप्त अडियो अनुसार पछि ती महिला कर्मचारीले प्रसाईबाट प्राप्त रकम सबै फित्र्ता गरेको जनाएकी छिन । आफूले सबै सापटी पैसा तिर्दै जाने क्रममा प्रसाईको पनि रकम फित्र्ता गरेको जनाएकी छिन । महिलाले आफूलाई रकम नचाहिएकोले वैंक मार्फत डिपोजिट गरेर पैसा फित्र्ता गरेको जनाएकी छन ।
तर अभियन्ता प्रसाईले आफूले सो रकम सापटीका रुपमा नभई सहयोग स्वरुप उपलव्ध गराएको जनाएका छन । पैसा फित्र्ता नगर्न बरु आमालाई पकेट खर्च पठाईदिन प्रसाईले ती कर्मचारीलाई अनुरोध गर्दै गरेको अडियोमा सुन्न सकिन्छ ।
सुन्नुहोस प्रसाईको अडियो ……
आफ्नो चाहना बिपरित पैसाकै माद्यमबाट आफूसंग नजिक हुने प्रसाईको निरन्तरको प्रयाशलाई निस्तेज पार्न आफूले निजको रकम वैंकमार्फत फित्र्ता गरेर निजको अडियो रेर्कड गर्न वाध्य भएको ती महिलाले बताएकी छिन ।
यसरी आफूलाई अभियन्ता बताउने व्यक्तिले पैसाको तुजुक देखाएर महिलासंग निकट हुने र प्रभावमा पार्ने प्रयाश गरेबाट उनको नियतमा नै प्रश्न उठेको छ । बिभिन्न प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रसाईले ती महिलालाई एक डेढदेखि दुई वर्षमा देखाइ दिने धम्की पनि दिएका छन ।
सन्नुहोस अडियो क्लीप्स…..
आफू स्व. गिरीजाप्रसाद कोईरालाबाट सदस्यता प्राप्त खाँटी काँग्रेसी भए पनि अहिले दलीय आस्थाबाट माथि उठेर भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता बनेको प्रसाईले युटुवमा राखेको एक भिडियोमा देखिन्छ ।
प्रसाईले आफूलाई नेपालका लागि नेपाली अभियानको केन्द्रीय अभियन्ता र झापा जिल्लाको संयोजकका रुपमा पनि आफ्नो परिचय भिडियो मार्फत दिएका छन । उनले उक्त भिडियोमा दलका नेता तथा शासकहरुको कडा आलोचना पनि गरेका छन ।
स्मरणीय छ, नेपालका लागि नेपाली अभियानले अभियानको नीति र उदेश्य बिपरित गएको भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहीलाई केही दिन अघि मात्रै निष्कासन गरेको थियो । अहिले झापा संयोजक प्रसाई पनि बिबादमा तानिएका छन । प्रसाईले ती महिला कर्मचारीसंग गरेको कुराकानीको अडियो रेर्कड उज्यालो नेपालसंग सुरक्षित छ ।
प्रकाशित: १५ मंसिर २०७६, आईतवार ०३:३७